IHobleys Cottage Stanton Nr Broadway - I-Airbnb
IHobleys Cottage Stanton Nr Broadway
Broadway, Cotswolds, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Gina
IHobleys Cottage ibekwe emaphethelweni edolobhana elinomlando laseStanton elithathwa kabanzi njengelinye lamadolobha amahle kakhulu eCotswolds.
Indawo yokuhlala kanokusho esanda kulungiswa ilula futhi ivulekile inekhishi elifakwe kahle, indawo yokudlela evulekile kanye negumbi lokuhlala. Vuka uthole ukubukwa okumangalisayo phezu kwamasimu aseduze; isilungiselelo esiphumuzayo kanye nesisekelo esihle ongahlola kuso ama-Cotswalds.
Indawo yokushicilela yasesigodini i-Mount Inn ingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo.
Esanda kulungiswa kabusha indawo yokuhlala kanokusho ilula futhi ivulekile inekhishi elihle elifakwe kahle nepulani evulekile yokudlela negumbi lokuhlala. Ezinsukwini zasehlobo iminyango yesiFulentshi ivulelwa engadini ukuze kudliwe i-allfresco noma izoso ngenkathi ubuka ukushona kwelanga phezu kwepulazi eliseduze. Ngezinsuku ezipholile ukufudumeza kwangaphansi kanye nesishisi sokhuni kuqinisekisa ukuthi uhlala ufudumele futhi uthokomele. Ikotishi lifakwe inhlanganisela yomklami kanye nefenisha yakudala. Izingubo zokulala zikakotini ezimhlophe, izingubo zokugqoka namathawula kwenza ukuhlala kwakho kukhululeke ngangokunokwenzeka.
Vula umnyango ongaphambili oya ku-The Cotswold Way, ipharadesi labahamba ngezinyawo nabahamba ngamabhayisikili, noma kungani ungagibeli phezu kweCotswold Hills esikoleni sokugibela esidumile sikaJill Cadenzas esitholakala edolobhaneni.
I-Stanton Village isukela ngekhulu le-17, izindlu zamatshe aphuzi ziklelisa umzila wesigodi ngezingadi ze-cottage ezifanelekile. Uma uhamba ibanga elide, indawo yokucima ukoma, i-Mount Inn, inokubukwa okudonsa umoya phezu kwesigodi kanti uLandlady Pip usebenzela i-Donnington Ale yendawo ngenkathi uLandlord Carl elungisa ukudla okuphekwe ekhaya.
IHobleys Cottage itholakala eChestnut Farm, emaphethelweni edolobhana elimangalisayo laseCotswold eStanton. I-17th Century Farm kanye nezakhiwo zamatshe zibheke amadlelo lapho kuklaba khona izimvu namahhashi. Ingadi ye-cottage ilungele ukuphumula ngengilazi yewayini ebheke emasimini. Uma ungathandi ukupheka vele uhambe uye endaweni yokucima ukoma.
Ikotishi elisanda kulungiswa alilungile futhi lethulwa sezingeni eliphakeme.
I-TV egumbini lokuhlala & womabili amakamelo okulala, i-Netflix.
Ukuxhumeka kwe-broadband okusheshayo.
Isitezi esiphansi sinohlelo oluvulekile olunekhishi elihlome kahle elinohhavini ophindwe kabili we-NEFF, i-microwave, umshini wokugeza izitsha kanye ne-induction hob, ifriji nesiqandisi. Kukhona indawo yokudlela yasekuseni kanye nendawo yokudlela ehlukile evula igumbi lokuhlala elinosofa abantofontofo abazungeze isishisi sezinkuni. Iminyango yesiFulentshi ivulekele engadini. Kukhona i-cloakroom engaphansi eneshawa eyengeziwe kanye nensizakalo ehlukile negumbi le-boot elinomshini wokuwasha kanye ne-tumble drier.
Iphansi lezinkuni elinamacansi. Amakamelo okulala amabili amakhulu, elilodwa elinombhede ophindwe kabili obhavu we-en-suite kanye neshawa kanye nelilodwa elinemibhede emibili noma emibili eyodwa kanye negumbi lokugeza langasese.
Ingadi: yangasese ekotishi.
I-Private off-road Parking yezimoto ezine.
Iphelele kulabo abafuna ukubalekela impilo yezwe futhi bajabulele indawo yasemaphandleni ezungezile. Ilungele ukuhamba itholakala ku-Cotswold Way, ukuhamba ngebhayisikili nokuhlola.
IHobleys itholakala edolobhaneni laseStanton nedolobhana layo elidumile iPub The Mount Inn. Kuningi ongakwenza endaweni, uzodinga ukuvakashela futhi.
Vuka uthole ukubukwa okumangalisayo phezu kwamasimu amadlelo asondelene, isilungiselelo esinokuthula nesiphumulele kanye nesisekelo esikahle sokuhlola ama-Cotswolds. Hamba uye eStanway House engumakhelwane, iJacobean Manor House nomthombo ungene eHailes Abbey. Khetha ama-strawberry e-Hailes Fruit Farm, udle isidlo sasemini e-Broadway Tower, e-Cotswolds ephakeme kunazo zonke Castle. Hlola i-15th Century Sudeley Castle & gardens kanye nedolobha elinomlando laseWinchcombe 5.4 miles. Thatha iSteam Train usuka e-Toddington uye endaweni edumile ye-Broadway 3.4 miles enezitolo zakudala, izitolo, ukudla kanye nezindawo zokudlela noma uhlole i-Chipping Campden, Stow-on-the-Wold Burford. Hamba noma ujikeleze i-Cotswold Way.
Ukugibela e-Jill Carenza's Riding School e-Stanton.
Vakashela i-Snowshill Manor kanye ne-Snowshill Lavender, i-Batsford Arboretum noma i-Adam Henderson's Cotswold Farm Park njengoba ibonakala ku-TV. Vakashela i-Cheltenham Races kanye nezindawo ezidumile zomjaho wamahhashi i-Plow at Ford noma i-Hollow Bottom. Dlala igalofu e-Broadway noma e-Naunton.
Umnikazi nomgcini wendlu bakhona ukuze bakusize ngesikhathi uhlala lapho uma kudingeka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Broadway namaphethelo